UNGAKHETHI: Izisombululo zokuSebenza kweDatha yokuThengisa kwiSalesforce AppExchange | Martech Zone
Kubalulekile kubathengisi ukuseka uhambo lwe-1: 1 kunye nabathengi kwisikali, ngokukhawuleza, nangokufanelekileyo. Enye yezona ndawo zisetyenzisiweyo zokuthengisa ezisetyenziselwa le njongo yiSalesforce Marketing Cloud (SFMC).
I-SFMC inikezela ngoluhlu olubanzi lwamathuba kwaye idibanisa ukuba ukusebenza okuninzi kunye namathuba angazange abonwe kubathengisi ukunxibelelana nabathengi kuzo zonke izigaba zohambo lwabathengi. Ilifu leNtengiso, umzekelo, aliyi kwenza ukuba abathengisi bachaze iimodeli zabo zedatha, kodwa bayakwazi ngokugqibeleleyo ukudibanisa okanye ukulayisha imithombo yedatha emininzi, eyaziwa ngokuba yizandiso zedatha.
Ukuguquguquka okukhulu okubonelelwa yi-SFMC kubangelwa ikakhulu kwinto yokuba imisebenzi emininzi kwiLifu leNtengiso iqhutywa yimibuzo yeSQL. Imisebenzi yokuthengisa efana nokwahlulahlula, ukwenziwa komntu, ukuzenzela, okanye ukunika ingxelo kufuna umbuzo owahlukileyo weSQL kwiLifu leNtengiso ukuze abathengisi bahluze, batyebise, okanye badibanise ulwandiso lwedatha. Bambalwa kuphela abathengisi abanolwazi kunye nobuchule bokubhala, ukuvavanya, kunye nokulungisa imibuzo yeSQL ngokuzimeleyo, okwenza inkqubo yokwahlula idle ixesha (kungoko ibiza kakhulu) kwaye idla ngokuthanda iimpazamo. Eyona meko inokwenzeka kulo naliphi na ishishini kukuba isebe lokuthengisa lixhomekeke kwinkxaso yezobuchwepheshe ngaphakathi okanye ngaphandle ukulawula idatha yabo kwi-SFMC.
I-DESelect igxile ekuboneleleni ngezisombululo zokwenza idatha yokuthengisa kwi-Salesforce AppExchange. Isisombululo sayo sokuqala sokutsala kunye nokulahla, iCandelo le-DESelect lenzelwe ngokukodwa abathengisi abangenamava ekhowudi, ebenza bakwazi ukuhambisa isixhobo ngoko nangoko kwimizuzu embalwa yofakelo ukuze bakwazi ukuqalisa kwangoko kunye nokwahlulwa kwamaqela ekujoliswe kuwo. amaphulo. NgeCandelo le-DESelect, abathengisi akufuneki babhale umbuzo omnye weSQL.
I-DESelect inoluhlu lwezisombululo ezilungele ukonyusa i-ROI kwi-Salesforce Marketing Cloud yeenkampani:
Sukukhetha iCandelo inikeza iimpawu zokwahlula okuqondakalayo kodwa ezinamandla ngokukhetha. Ukhetho luvumela abasebenzisi ukuba badibanise imithombo yedatha kwaye basebenzise izihluzi ukuvelisa amacandelo ngendlela ethintela imfuno yemibuzo ye-SQL. Siyabulela kwisixhobo, abasebenzisi banokwenza imisebenzi yokwahlula kwi-SFMC 52% ngokukhawuleza kwaye baqalise iikhankaso zabo ukuya kwi-% 23 ngokukhawuleza, ngelixa beqhubeka nokusebenzisa ngokupheleleyo amathuba amaninzi anikwe yi-Marketing Cloud. I-DESelect yenza ukuba abathengisi bahlule, bajolise, kwaye benze unxibelelwano lwabo ngokuzimeleyo (ngaphandle kwesidingo seengcali zangaphandle) kunye nobuchule obuninzi kunangaphambili.
Sukukhetha Qhagamshelana sisisombululo sokudityaniswa kwedatha yokuthengisa esenza ukuba iingcali zokuthengisa ezizenzekelayo zigcine ixesha ngokudibanisa ngokulula kunye nokugcina nawuphi na umthombo wedatha nge-webhooks (API) ukuya kwi-Salesforce Marketing Cloud kunye / okanye i-CDP ye-Salesforce kunye nomva, usebenzisa enye into ngaphandle kweempawu zokutsala kunye nokulahla. Ngokungafaniyo nezixhobo ezinkulu zokudibanisa, i-DESelect Connect yakhelwe abathengisi abanobuchule bokusebenza, beyenza i-nimbler, ngexabiso eliphantsi xa kuthelekiswa nezinye izisombululo, kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Njengazo zonke iimveliso ze-DESelect, Qhagamshela ayifuni naliphi na ixesha lokuphumla lokufakela okanye ukuseta, umane uplagi kwaye udlale. Okona kubaluleke kakhulu, ayifuni ukuzibamba kwaye yenzelwe imida ye-SFMC kwinani leefowuni ze-API.
Sukukhetha uPhendlo ayisiyonto intsha, sele ikhona kwaye isenjengokwandiswa kweChrome ukunceda abathengisi bafune ngokulula nantoni na kwilifu labo lokuthengisa. Ibar yokukhangela edityaniswe ngokupheleleyo ikuvumela ukuba ujonge Izandiso zeDatha, kuquka:
Kule nyanga, i-DESelect ikwakhuphe ukukhangela kwi Faka isicelo. Isigqibo sokongeza imveliso kwindawo yentengiso yeSalesforce kwakungenxa yemfuno edumileyo evela kubasebenzisi abasebenza kwimibutho engaxhasi izandiso zechrome. Ngoku, wonke umsebenzisi weLifu leNtengiso ufumana izibonelelo zesi sixhobo esisebenziseka lula kunye nesokugcina ixesha.
Sukukhetha Iimpawu zeCandelo
Dibanisa izandiso zedatha kunye -Abasebenzisi banokusebenzisa ukutsala kunye nokulahla ukuze bajoyine ngokulula izandiso zedatha kunye kwaye bachaze indlela ezinxulumene ngayo. Abalawuli banokuluchaza kwangaphambili obu budlelwane.
Ungazibandakanyi iirekhodi -Ngokufana nokujoyina izandiso zedatha, abasebenzisi banokubonisa iirekhodi abafuna ukuzikhupha ekukhetheni kwabo.
Fakela imithombo yedatha – Kulula nge Sukukhetha ukudibanisa abafowunelwa abavela kwimithombo eyahlukeneyo yedatha kunye.
Sebenzisa imilinganiselo yokucoca -Abasebenzisi banokufaka izihluzi ezininzi kuzo zonke izandiso zedatha kunye nemithombo, exhasa zonke iifomati zentsimi.
Yenza izibalo -Ii-subqueries ivumela ukudityaniswa kwedatha kunye nokwenza izibalo, njengokuba zininzi izinto ezithengiweyo ezenziwe ngumthengi okanye ukuba umthengi uchithe malini.
Hlela kwaye unciphise iziphumo -Abasebenzisi banokuhlela iziphumo zabo ngokwealfabhethi, ngomhla, okanye nayiphi na enye indlela esengqiqweni. Basenokunciphisa inani leziphumo ukuba zifuneka.
Chaza kwaye usebenzise uluhlu lokukhetha -Abasebenzisi banokunika amaxabiso okukhetha kunye neelebhile njengomlawuli, okwenza iqela labo lihluze ngokuqiniseka ngakumbi.
Cwangcisa amaxabiso asekelwe kumthetho okanye asekelwe kumgaqo -Abasebenzisi banokuzenzela iziphumo zabo, ngokuseta amaxabiso emigaqo okanye asekelwe kumgaqo, umzekelo, imazi iba khumbula kwaye indoda iba Baba.
Iirekhodi eziphindwe kabini ezinemigaqo - Iirekhodi zinokuchithwa ngomthetho omnye okanye emininzi, inikwe kuqala.
Sebenzisa icandelo leengxangxasi -Abasebenzisi banokusebenzisa imithetho ye-cascading ukusebenzisa 'icandelo leengxangxasi'.
Sukukhetha amabali empumelelo
Okwangoku, i-DESelect ithenjwa ziimpawu zehlabathi ezifana neVolvo Cars Europe, T-Mobile, HelloFresh, kunye ne-A1 Telekom. Umgaqo-nkqubo wenkampani yokugcina ubudlelwane obusondeleyo kunye nabaxhasi bayo apho uqeqesho kunye nenkxaso ezinikeleyo kwinqanaba lokuqala, nangona i-app ilungile ukususela kumhla wofakelo, ivumele amabali okuphumelela okuqhubekayo.
Uphononongo lweEmerald: AseCalifornia Emerald ngumqhubi wemicimbi ye-B2B ephilayo kunye nentywilayo kunye nemiboniso yorhwebo. Yasekwa ngo-1985, olu phawu luhamba phambili kwimarike luqhagamshele ngaphezulu kwe-1.9 yezigidi zabathengi kwimisitho ye-142 kunye neempawu zeendaba ezili-16.
I-Emerald kutshanje iqalise ukusebenzisa i-SFMC. Kwakamsinyane emva kokusebenzisa ilifu, iqela labo lezentengiso elizisebenzelayo lifumanise ukuba kukho ukuthembela kakhulu kangakanani kwimibuzo yeSQL engenaso sisombululo sisebenziseka lula kubathengisi abangenabo ubuchwephesha beSQL. Bafumene ukungasebenzi kakuhle ekwakhiweni kolwandiso lwedatha kwangaphambili kwaye balwa nokungaguquki kokuchaza zonke iinkalo kwangaphambili.
Ngaphambi kokusebenzisa i-DESelect, abathengisi be-Emerald babengenalo ukufikelela kwidathabheyisi, njengoko iqela labo eliphakathi lakha amacandelo ngaphambili. I-DESelect incede i-Emerald ekwenzeni ukuba iqela lezentengiso lifikelele kwaye lilawule idatha lonke ngelixa lisenza amacandelo ngokufanelekileyo, kwaye ngokuzimeleyo. Ngoku, bade bajonge ekukhupheleni i-DESelect kubathengisi ngokwabo ukubavumela ngokupheleleyo abasebenzisi babo be-SFMC.
I-DESelect inyuse ukusebenza kakuhle nge-50%. Kulula kakhulu ukwenza into ye-ad-hoc ngoku.
UGregory Nappi, uMlawuli oMkhulu, uLawulo lweDatha kunye noHlalutyo kwi-Emerald
Ukuze ufunde ngakumbi malunga nendlela Sukukhetha inokunceda umbutho wakho:
Ndwendwela Sukukhetha Cwangcisa Sukukhetha iDemo
tags: a1 telekomApietshintshiuphendlo oluzenzekelayoukongezwa kwe-chromeuphendlo lomxholoulwandiso lwedathaudibaniso lwedathaisahlulo sokwandiswa kwedathasukukhethai-imeyile ithumela uphendlouphendlo lwetemplate ye-imeyileitemplate ye-imeyilenelesmaradouphendlo lweenkcazelo zokucocaUlwandiso lweGoogle ChromeUGregory NappiMoloUphendlo lwemisebenzi yokubuzabuza uphendloukuthengisaindawo yokuthengisai-cdp yokuthengisaIlifu lokuthengisa labasebenzisfmct-iselfowuniIimoto zeVolvo eYurophu